Baxhaswe ngomfaniswano wesikole eNdabanhle Primary | Eyethu News
Baxhaswe ngomfaniswano wesikole eNdabanhle Primary
“Lolu uhlelo lukahulumeni lokuqinisekisa ukuthi abantwana banawo umfaniswano.”
Othisha, abafundi kanye nabazali babafundi baseNdabanhle abaxhaswe ngomfaniswano wesikole.
INJABULO ibibhalwe emehlweni kubafundi abanga-62 baseNdabanhle Primary School Osizweni nabaxhaswe ngomfaniswano wesikole yihhovisi loMnyango wezeMfundo esifundeni saseMajuba.
Bathulwe imithwalo ebise mahlombe wokuthengela izingane umfaniswano wesikole abanye abazali bezingane ezihlomule ohlelweni abathi lokuxhaswe uMnyango wezeMfundo. Abazali bezingane zaseNdabanhle balwemukele ngenzindlela ezingafani loluxhaso, babodwa abebekikiza, kanti abanye bebehuba amaculo okubonga uMdali, kanti abanye bebemoyizela nje kubona noma ngubani ukuthi kukhona okudilizwe emahlombe abo. Kepha bonke ekugcineni balubongile loluxhaso, abanye bavuma ukuthi lufike ngesikhathi esihle impele abantwaneni babo.
UNkk Nonhlanhla Sithole nobemele uMnyango wezeMfundo eNdabanhle, uthe loluxhaso selusize abafundi abaningi ngaphansi kwesifunda saseMajuba. Enkulumweni yakhe uNkk Sithole, uthe loluhlelo luqhutshwa nguhulumeni ngoba enenhloso yokukhuthaza imfundo kuzona zonke izikole. Uqhube wathi izikole ezithole loluxhaso eMajuba zinga-45 ubuningi bazo. “Ziyavakashelwa zonke izikole ezinikwe loluxhaso ngenhloso yokuthi kubonakale ukuthi abafundi bayawuthola ngempela lomfaniswano wesikole. Ngaleyondlela nathi sibhala imininingwane siyibhekise ehhovisi loMnyango wezeMfundo esifundazweni saKwaZulu-Natal. Engifike ngakubona eNdabanhle, ngibonile ukuthi mkhulu umsebenzi owenziwe ngothisha bebambisene nabazali kanye nabafundi,” kusho uNkk Sithole.
Omunye wothisha baseNdabanhle ekhipha umfaniswano wesikole komunye umfundi ekanye nomzali wakhe.
Uqhube wathi ngendlela okuyiyo, kuyabonakala ukuthi isamba semali esingango-R24 500 uhulumeni axhase ngaso basisebenzise ngendlela efanele. Ubuye wathi ngaphezu kwalokhu asikho nesisodwa isikole eMajuba esitholakale senza ubuqhophololo ngaloluxhaso. Uthe kukhombisile ukuthi othisha bazinikele emsebenzini wabo wokubona loluxhaso lubayimpumelelo. UNkk Sithole ubuye walanda ngohlelo lokuxhaswa kwabafundi ngomfaniswano wesikole. Uthe luqale ngonyaka ka-2008 lapho okwabonakala khona ukuthi liyanda inani labafundi abashiya phansi isikole ngoba bekhala ngokungabinawe umfaniswano. “Ngaleyondlela yingakho uhulumeni ezibandakanya nokuxhasa abafundi ngomfaniswano wesikole. Selokhu lwaqala loluhlelo, iyabonakala inqubekela phambili, ngoba siyancipha isibalo sabafundi abashiya isikole ngoba bengenawo umfaniswano. Sibheka kakhulu kulezozikole ezinabafundi abahlwempu, futhi ezakhe ezindaweni ezingamakhaya,” kusho uNkk Sithole.
Izinkulungwane eMkhosini woMhlanga